Halis weyn oo ka dhallan doonto heshiis qiyaano ku ah Sharciga Canshuurta dalka oo ay wada galeyn Baarlamaanka iyo Wasaaradda Maaliyadda ? - Caasimada Online
Home Warar Halis weyn oo ka dhallan doonto heshiis qiyaano ku ah Sharciga Canshuurta...
Halis weyn oo ka dhallan doonto heshiis qiyaano ku ah Sharciga Canshuurta dalka oo ay wada galeyn Baarlamaanka iyo Wasaaradda Maaliyadda ?
Muqdisho (Caasimadda Online) – Guddiga Maaliyadda ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa heshiis qiyaano ah ku sharciga Canshuurta dalka la galay Wasaaradda Maaliyadda, wuxuuna dhigayaa heshiiskaas in xubnaha Baarlamaanka laga dhigo cansuurta laga qaado 10%.
Haddaba Heshiiskaan ayaa waxaa ka dhallan karo arrin qatar ku ah qaaditaanka Canshuurta dalka, maadaama Baarlamaankii matalayey shacabka Soomaaliyeed uu bilaabay inuu dantiisa kaliya fiirsado isla markaasna uusan ka shaqeyn danaha dalka iyo Shacabka.
Heshiiskaan ayaa keeni karo inay Shacabka Soomaaliyeed ka niyad jabaan bixinta canshuuraadka dalka Maadaama Baarlamaanka Soomaaliya uu diiday bixinta tirada rasmiga ah ee canshuurta laga rabay.
Heshiiskaan qiyaanada ku ah Canshuuraadka dalka ayaa si cad u muujinayo in Guddiga Maaliyadda Baarlamaanka Soomaaliya ay si cad ugu tunteen sharciga Canshuuraadka dalka oo qabo sida hoos ku qoran:
Wuxuuna sii yiri “Aadban u careesanahay waayo $1800 ayaan bishii mushaar ahaan u qaataa waxaana bixiyaa canshuur ka badan midda ay xil dhibaanada bixiyaan, kuwaas oo iga hodansan iyagana awood badan una shaqeenayaan naftooda laakiin aan shacabka danahooda ka shaqeyneyn”.
Cabdulqaadir Nuur Xuseen oo ah waaya arag usoo joogay dowladihii Soomaaliya soo maray ayaa sheegay inay tallaabadaan tahay mid uu la yaabay isla markaasna ay muujineyso in Xubnaha Baarlamaanka Soomaaliya ay kaliya matalaan calooshooda oo aysan shacabka Soomaaliyeed matalin wuxuuna Yiri:
” Adeerow arrintaan waa mid lala yaabo, waxaa cadaatay in Xubnaha Baarlamaanka ay matalaan calooshooda oo aysan shacabka Soomaaliyeed matalin, waxaana ku tallin lahaa in dhammaantood shaqada laga eryo, waxay iloobeen inay yihiin shaqaale u shaqeeyo shacabka Soomaaliyeed”